Qalabka Shear Sare
Control Xakamaynta PLC (HMI ikhtiyaar ah) waxaa loo qaatay in lagu xakameeyo habka gacanta iyo tooska ah, taasoo u oggolaanaysa habeynta xogta nidaamka;
Kalluumeysiga kiciyaha iyo jibbaaraduhu waxay labaduba qaataan dariiq isdaba-joog ah oo isdaba-joog ah oo loogu talagalay xakamaynta xawaaraha, xakamaynta fudud ee cabirka granule;
Chamber Qolalka wareega ee loo yaqaan 'Rotation usheeda dhexe' waxaa loogu talagalay shaabad hawo leh, iyadoo laga takhalusi doono dhibaatada ku-xirnaanta boodhka; Waxay leedahay shaqeyn nadiifin otomaatig ah;
Bowl Baaquli isku dhafan oo qaabeysan ayaa siinaya xitaa isku darka qalabka; Ku wareejinta dareeraha qaboojinta iyada oo loo marayo jaakadda hoose ee baaquli isku qasan, heerkulka joogtada ah ayaa si fiican loo qabtaa marka la barbardhigo habka qaboojinta hawada, sidaas awgeedna loo hagaajiyo tayada granules;
Lid Daboolka weelka si toos ah ayaa loo furaa oo loo xidhayaa;
La jaan qaadi kara qalabka qalajinta; Xajmiga weyn ee granulator qoyan waxaa loogu qaabeeyey jaranjaro hawl fudud;
System Nidaamka qaadista qalabka wax kiciya wuxuu fududeeyaa nadiifinta qalabka wax lagu duubo iyo baaquli;
Mashiinka Buuxinta Kaabsalka, NJP Taxanaha
NJP taxanaha mashiinka buuxinta kaabsalka tooska ah wuxuu soo bandhigayaa hawlgal wareeg ah oo goos goos ah. Naqshadeynta disk-ka dawada lagu buuxiyo, kaaliyaha kaabsolka ayaa otomaatiya dhammaan howlaha oo ay ku jiraan kala-soocidda, buuxinta, diidmada kaabsulka oo cilladaysan, qufulka kaabsolka, iyo ka-saarista kaabsolka ee dhammaatay Mashiinka kaabsalku wuxuu ka kooban yahay miis tusmaysan oo si dhammaystiran u lifaaqan, waa qalabka daawada ee ku habboon soo saaridda kaabsoosha adag ee warshadaha dawooyinka iyo cuntada.
Mashiinka Buuxinta Kaabsulka, Taxanaha CGN-208D
CGN-208D taxanaha nus-otomaatiga mashiinka wax lagu buuxiyo wuxuu ku haboon yahay buuxinta kaabsulka leh budada ama granules ee warshadaha dawooyinka iyo caafimaadka. Faylka kaabsolka ah wuxuu ka kooban yahay saldhigyo madaxbannaan quudinta kaabsoolka ah ee faaruqinta ah, quudinta budada ee gacanta lagu shaqeeyo iyo kaabsolka oo la xidho. Isticmaalidda xakamaynta xawaaraha isbeddelka waxay hubisaa quudinta budada oo sahal ah. Lagu sameeyay iyadoo la isticmaalayo birta aan xarka lahayn, jirka mashiinka iyo shaashadda shaqada ayaa buuxiya shuruudaha nadaafadda sare sida waafaqsan heerarka GMP.
Otomaatig Bin Bin, Taxanaha HZD
Qaswadayaasha otomaatiga ah ee otomaatigga ah waa qalab isku-dhafan oo habboon oo lagu fuliyo howlaha isku-darka daawooyinka, kiimikada, cuntada iyo warshadaha kale. Qalabka isku dhafan ee isku-dhafan ayaa lagu dhejiyaa xagal 30 darajo ah dhidibka isku-darka, waxay u saamaxaysaa qalabka in lagu dhex daro qoob-ka-wareegga leh leexashada wareega iyo isla mar ahaantaana si isdaba-joog ah loogu dhaqaaqo darbiga biraha si loo helo natiijooyinka isku-dhafka ugu fiican. Nidaamka kontoroolka otomaatiga ah ee PLC waa la qaatay oo lagu qalabeeyaa aaladda badbaadada infrared iyo dheecaanka balanbaalis dheecaanka si loo hubiyo geedi socodka wax soo saarka aaminka ah. Mashiinka qashin-qubka ayaa u oggolaanaya walxaha in lagu farsameeyo qaybo kala duwan oo lagu farsameeyo isla weelka, iyadoo laga takhalusayo baahida loo qabo quudinta joogtada ah ee qalabka. Isku-darka qashin-qubka otomatiga ah wuxuu siiyaa waxqabad aad u wanaagsan dhinacyada la-socodka wax-ku-oolka ah ee siigada iyo wasakhda iskutallaabta, yareynta waxyaabaha lumay iyo hagaajinta habka wax soo saarka, waxaana lagu caddeeyay si buuxda iyadoo la raacayo heerka GMP ee wax soo saarka dawooyinka.
Bin Qase, HGD Series
Mashiinka qashinka ayaa si guul leh loo farsameeyay loona soo saaray iyada oo ku saleysan tiknoolajiyada casriga ah ee adduunka oo ay weheliso aqoonteena qotada dheer ee suuqyada shisheeye iyo kuwa gudaha. Mashiinkaan isku dhafka ah malaha gees dhintey iyo boolal la kashifay, waxaana lagu gartaa qaab dhismeed macquul ah, waxqabad xasiloon iyo howl fudud. Waalka balanbaalis dheecaanku waa qalabaysan yahay si looga fogaado hawlgal aan sax ahayn, hubinta badbaadada wax soo saarka. Qalabka isku dhafan ee isku-dhafan ayaa lagu dhejiyaa xagal 30 darajo ah dhidibka isku dhafka ah, waxay u saamaxaysaa qalabka in lagu dhex daro qoob-ka-wareegga leh leexashada wareega iyo isla mar ahaantaana si isdaba-joog ah loogu dhaqaaqo darbiga biraha si loo helo natiijooyinka isku-darka ugu fiican uguna habboon habka wax soo saar ee waa mid si buuxda ugu habboon GMP dalabka dawooyinka.
Ku dhaji Bin Blender, taxanaha HTD
Post bin blender ayaa si guul leh loo soo saaray loona soo saaray iskudarka tikniyoolajiyadda casriga ah ee adduunka iyadoo aqoonteena iyo khibradeena dhanka daawooyinka. Qashinka weelka waxa loo qaadi karaa dherer ku habboon soosaarida habboon. Mashiinkaan isku dhafan malaha gees dhintey iyo boolal la kashifay, waxaana lagu muujiyey qaab dhismeed macquul ah, waxqabad xasiloon iyo howl fudud. Qalabka isku dhafan ee isku-dhafan ayaa lagu dhejiyaa xagal 30 darajo ah dhidibka isku-darka, waxay u saamaxaysaa qalabka in lagu dhex daro qoob-ka-wareegga leh leexashada wareega iyo isla mar ahaantaana si isdaba-joog ah loogu dhaqaaqo darbiga biraha si loo helo natiijooyinka isku-dhafka ugu fiican. Nidaamka kontoroolka otomaatiga ah ee PLC waa la qaatay oo lagu qalabeeyaa aaladda badbaadada infrared iyo dheecaanka balanbaalis dheecaanka si loo hubiyo geedi socodka wax soo saarka aaminka ah. Mashiinka isku-dhafka ah wuxuu u oggolaanayaa qalabka in lagu farsameeyo qaybo kala duwan oo lagu farsameeyo isla weelka, iyadoo laga takhalusayo baahida loo qabo quudinta joogtada ah ee qalabka. Isku-darka qashin-qubka ayaa soo bandhigaya waxqabad aad u wanaagsan oo ku saabsan dhinacyada xakamaynta wax ku oolka ah ee boodhka iyo wasakheynta iskutallaabta, yareynta waxyaabaha lumay iyo hagaajinta habka wax soo saarka, waxaana lagu caddeeyay si buuxda iyadoo la raacayo heerka GMP ee wax soo saarka dawooyinka.
Polisher Capsule Vertical, LFP-150A
Waxsoosaarka kaabsalka ah ee LFP-150A ayaa loo isticmaalaa si wax ku ool ah u qaadista boodhka xad-dhaafka ah iyo kaabsolka xoqidda iyadoo kor loo sii marinayo Mashiinkaani mashiinka kaabsalka ah waxaa loo isticmaali karaa mashiinka buuxinta kaabsoosha, kaabsoolaha sorter iyo qalabka baarista biraha si loo xaqiijiyo nadiifinta, gaarsiinta kor, kala soocida iyo ogaanshaha.
Waxaa loo adeegsaday kaabsolidda xoqidda inta kor loo qaadayo;
Fort Quudinta iyo sii deynta qalcadda waxay noqon kartaa 360 digrii oo wareegsan si loola jaanqaado hawlgallada kala duwan;
Kaabsoolka sorter waxaa loo isticmaalaa si otomaatig ah u kala sooca kaabsoolo madhan iyo kaabsullo aan u qalmin;
Method Habka rakibaadda deg-degga ah wuxuu bixiyaa rakibidda iyo kala-goynta si fudud;
Parts Qaybaha taabashada kaabsoosha waxay ka sameysan yihiin bir bir ah;
Brush Burush furi kara nadiifinta fudud;
■ Buuxiyo shuruudaha nadaafadda sare ee heerka GMP.
Kaabsal Polisher, JFP-110A
JFP-110A polisher kaabsal taxane isku daraa kaabsal nadiifinta iyo kala soocidda, taas oo loo isticmaali karo si hufan looga saaro boodhka xad-dhaafka ah iyo baabi'inta korantada ma guurtada ah. Mashiinka qaan-galka kaabsalku wuxuu sidoo kale ku habboon yahay inuu si otomaatig ah u kala sooco kaabsulka madhan iyo kaabsoosha aan u qalmin. Naqshadeynta degdegga ah waxay bixisaa rakibid fudud iyo kala-goyn. Qaadashada nidaamka xakamaynta VFD waxay bixisaa xakameyn xawaare sax ah oo leh buuq hooseeya inta lagu guda jiro orodka.
Mashiinka Mashiinka Baakadaha otomaatiga ah
Mashiinka baakadaha ee finanka otomaatigga ah waxaa loo dhisay alaabooyinka ALU / PVC iyo ALU / ALU ee noocyada kala duwan ee dawooyinka iyo cuntooyinka, sida kiniinnada, kaabsulka, kansarka, nacnaca, iyo sidoo kale walxaha kale ee warshadaha.